Gịnị Bụ Jeruselem Ọhụrụ E Kwuru Okwu Ya na Baịbụl n’Akwụkwọ Mkpughe?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uruund Valencian Venda Vietnamese Welsh Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Gịnị Bụ Jeruselem Ọhụrụ?
“Jeruselem Ọhụrụ” pụtara ugboro abụọ na Baịbụl. Jeruselem a abụghị obodo nkịtị, kama ọ nọchiri anya ndị na-eso ụzọ Jizọs ndị ga-aga eluigwe ka ha na Jizọs soro chịa n’Alaeze Chineke. (Mkpughe 3:12; 21:2) Ihe Baịbụl kwuru gosiri na e nwekwara ike ịkpọ ha nwaanyị Kraịst na-alụ ọhụrụ.
Ihe ndị ga-enyere gị aka ịmata ihe Jeruselem Ọhụrụ pụtara
Jeruselem Ọhụrụ nọ n’eluigwe. N’ebe ndị ahụ Baịbụl kwuru gbasara Jeruselem Ọhụrụ, ọ sịrị na o si n’eluigwe na-agbadata. Ndị mmụọ ozi nọkwa n’ọnụ ụzọ ámá Jeruselem Ọhụrụ a na-eche nche. (Mkpughe 3:12; 21:2, 10, 12) Otú obodo a si buo ezigbo ibu gosikwara na e nweghị otú ọ ga-esi dịrị n’ụwa. O nwere akụkụ anọ há nhata. A tụọ ya gburugburu, ọ dị “puku fọlọng iri na abụọ,” ma ọ bụ “ihe dị ka puku kilomita abụọ, narị abụọ na iri abụọ.” (Mkpughe 21:16) Ihe ọ pụtara bụ na akụkụ ya nke ọ bụla ga-afọ obere ka o ruo narị kilomita ise na iri isii n’ịdị elu.
Ndị so na Jeruselem Ọhụrụ bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, ndị a kpọkwara nwaanyị Kraịst na-alụ ọhụrụ. A kpọrọ Jeruselem Ọhụrụ ‘nwaanyị a na-alụ ọhụrụ, bụ́ nwunye Nwa Atụrụ ahụ.’ (Mkpughe 21:9, 10) Nwa Atụrụ ahụ bụ Jizọs Kraịst. (Jọn 1:29; Mkpughe 5:12) “Nwunye Nwa Atụrụ ahụ,” ya bụ, nwaanyị Kraịst na-alụ ọhụrụ, bụ Ndị Kraịst ha na Jizọs ga-anọ n’eluigwe. Baịbụl ji Jizọs na Ndị Kraịst a tụnyere di na nwunye. (2 Ndị Kọrịnt 11:2; Ndị Efesọs 5:23-25) E dekwara “aha iri na abụọ nke ndịozi iri na abụọ nke Nwa Atụrụ ahụ” n’elu nkume ndị e ji tọọ ntọala Jeruselem Ọhụrụ. (Mkpughe 21:14) Ihe ndị a e kwuru gbasara Jeruselem Ọhụrụ na-eme ka o doo anya na ọ bụ Ndị Kraịst a kpọrọ ka ha dịrị ndụ n’eluigwe bụ Jeruselem Ọhụrụ n’ihi na e kwukwara na ‘e wukwasịrị ha n’elu ntọala nke bụ́ ndịozi na ndị amụma.’—Ndị Efesọs 2:20.
Ndị so na Jeruselem Ọhụrụ ga-abụ ndị ọchịchị. N’oge ochie, Jeruselem bụ isi obodo Izrel. Ọ bụ n’ebe ahụ ka Eze Devid, Sọlọmọn nwa ya, na ndị si n’ezinụlọ ha nọ chịa “n’ocheeze Jehova.” (1 Ihe E Mere 29:23) A kpọrọ Jeruselem “obodo nsọ.” N’oge ndị si n’ezinụlọ Devid chịrị, Jeruselem nọchiri anya ọchịchị Chineke. (Nehemaya 11:1) A kpọkwara Jeruselem Ọhụrụ “obodo nsọ.” Ndị so na Jeruselem Ọhụrụ a ga-alakwuru Jizọs n’eluigwe soro ya ‘chịa ụwa dị ka ndị eze.’—Mkpughe 5:9, 10; 21:2.
Chineke ga-eji Jeruselem Ọhụrụ meere ndị bi n’ụwa ihe ọma. N’akwụkwọ Mkpughe, a hụrụ ka Jeruselem Ọhụrụ “si n’eluigwe, n’ebe Chineke nọ, na-agbadata.” Ihe a gosiri na ọ bụghị naanị n’eluigwe ka Chineke ji Jeruselem Ọhụrụ na-arụ ọrụ. (Mkpughe 21:2) Ihe a Baịbụl kwuru gosiri na e nwere ihe jikọtara Jeruselem Ọhụrụ na Alaeze Chineke. Ọ bụ Alaeze a ka Chineke ga-eji eme uche ya “n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” (Matiu 6:10) Lekwa ihe ọma ụfọdụ Chineke bu n’obi imere ndị bi n’ụwa:
A ga-ewepụ mmehie. “Osimiri nke mmiri nke ndụ” si na Jeruselem Ọhụrụ na-asọpụta. Mmiri a na-ede “osisi nke ndụ.” Osisi ndị ahụ bụ “maka ịgwọ mba niile.” (Mkpughe 22:1, 2) A ga-agwọ ndị mmadụ ọrịa niile ji ha, meekwa ka ha na Chineke dịrị ná mma. A ga-esi otú a wepụ mmehie. Ndị mmadụ ga-ezukwa okè otú Chineke bu n’obi mgbe o kere mmadụ.—Ndị Rom 8:21.
Ndị mmadụ na Chineke ga-adị n’ezigbo mma. Ọ bụ mmehie mere ka ndị mmadụ na Chineke ghara ịdị ná mma. (Aịzaya 59:2) Mgbe a ga-ewepụ mmehie, amụma a ga-emezu kpamkpam: “Ụlọikwuu nke Chineke dịnyeere mmadụ, ya na ha ga-ebikwa, ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha.”—Mkpughe 21:3.
A ga-ewepụ ahụhụ na ọnwụ. Chineke ga-eji Alaeze ya ‘hichapụ anya mmiri niile n’anya ndị mmadụ, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ.’—Mkpughe 21:4.
Baịbụl Ebe Ndị Mmụọ Bi Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Jeruselem Ọhụrụ?
ijwbq isiokwu 145